ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: မှ... သို့... ဒဏ်ရာရှင်
မှ... သို့... ဒဏ်ရာရှင်
ငါဟာ ပိုးကိုက်ခံ ပန်းဖူးလေး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်..
ဆက်ပွင့်ရင် မလှမှာ စိုးလို့ ...
ပွင့်ရကောင်းနိုး မပွင့်ရကောင်းနိုး ...
ပွင့်ဖို့တာဝန် က အဓိက..
လှဖို့တာဝန်က သာမညမို့ ..
ဆက်သက် ရှင်သန်ပါရစေ ..
ဆက်လက် ဖူးပွင့် ပါရစေ...
ပွင့်ဖျက်ပိုးကိုတော့ ဂရုမစိုက် အားတော့လို့ ..
မင်းရဲ့ စည်းချက်ကျ မြည်သံမှာ
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:41 PM
October 17, 2007 at 6:31 AM
ရွှေမြန်မာများဧ။် ပညာရေးနှင့် သတင်း နည်းပညာ ရပ်ဝန်း
ပညာရေးနှင့် သတင်း နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စာအုပ်များကို download ရယူနိုင်ပါသည်။
အလင်းကသာ အမှောင်ကို ထိုးဖောက် ၀င် ရောက် နိုင်စွမ်း တာပါ .. အမှောင်က အလင်းကို မဖုံးလွှမ်း နိုင်ပါဘူး အလင်းပိတ် အရာ ၀တ္ထု ကသာ အလင်းကို ကာဆီးလို့ အမှောင်ကို ဖန်တီး နိုင်တာပါ … ကဲလာ!!! အဲဒီ အလင်းပိတ် အရာဝတ္ထုကို တို့သွား ဖယ်ကြမယ် ညီညီညာညာပေါ့ ..
... တရားနာနေကျ websites ... Dhamma Download e-Dhamma.com ထေရ၀ါဒ တရားတော်များ .......... ..
သံလွင်ကို အိပ်မက်ရင် ငါတို့ရဲ့ တေးသွားကို ကြားလိမ့်မယ်
... စုပေါင်း ဘလော့အိမ်ယာ လေးများ ... နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး မျိုးဆက်သစ် မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်များ သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ အိပ်မက်အိမ် မြန်မာ လူငယ်များ အတွက် ပညာရေး .......... ..
.ဒီဘလော့ပေါ်မတင်ရသေးတဲ့ကျွန်မရဲ့ postများ. သံလွင် အိပ်မက် E-zine အိပ်မက်များ .......... ..
..ကလေးတွေကိုနားလည်ဖို့လူကြီးများဖတ်ရန်.. ကလေးသူငယ်များ မတော်တဆ ဖြစ်မှု ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ အာဖရိက ကလေး သတင်းများ ကလေူးသူငယ်များ စော်ကား ခံရမှု ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ ကလေးသူငယ် ဘေးကင်းရေး အဖွဲ့ ကလေးတို့ အတွက် ပညာရေး စနစ်များ ကလေးတို့ အတွက် သိပ္ပံ ပညာ ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောရင် .......... ..
... ကိုယ့်လူမျိုးကို အားပေးမယ် ... အိမ်တွင်း အလှဆင်နဲ့ အမှတ်ရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ကမ္ဘာတလွှား ခရီးသွား ထေရ၀ါဒ တရားတော်များ .......... ..
... ကိုယ့်လူမျိုးကို ကူညီမယ် ... ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာ ဖောင်ဒေးရှင်း (မြန်မာ) ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာ ဖောင်ဒေးရှင်း (အင်္ဂလိပ်) ကမ္ဘာ တလွှား ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ ရဲ့ အခွင့်အရေးကို စောင့်ကြည့်ခြင်း .......... ..
... အပန်းဖြေဖို့... မဉ္ဇူရီရဲ့ အနုပညာများ မြန်မာဆန်ဆန် သီချင်းဟောင်းများ .......... ..
... သွားလည်နေကျ ဘလော့များ ... မြန်မာဘလော့လမ်းညွှန် SPot FM အတွေး သံစဉ်များ ပြည်ချစ်မောင်မယ် မြန်မာမိန်းကလေးများ တကယ် အင်္ထီးကျန် မဟုတ်တဲ့ အထီးကျန်သူ ပန်းချစ်သူလေးများ မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် ဒေါက်တာအစ်ကို (ကို) ညီလင်းဆက် (ကို) ရန်အောင် (ကို) ညီညီ (သံလွင်) (ကို) စစ်အိမ် (ကို) အောင်မော်ဟိန်း (ကို) ဇင်ကိုလတ် (ကို) မျိုးကျော်ထွန်း (ကို) နေဘုန်းလတ် (ကို) နတ္ထိ (ကို) မျက်လုံး IT (ကို) မိုးတိမ် (ကို) မောင်ရိုး (ကို) မောင်ပွတ် (ကို) မောင်သင်္ကြန် (ကို) မောင်လှ (ကို) စိုးဇေယျ (ကို) ကျော်ဇေယျ (ကို) မိုးလှိုင်ည (ကို) တေဇာ (ကို) ရဲဇေယျရှိန် (ကို) သီဟ (ကို) ချစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ) (ကို) ရွာသားခေါ် လင်းလင်း (ကို) လောရှည် (ကို) မင်းသစ္စာ (ကို) မင်းကျော် (ကို) မျှားပြာ (ကို) တိုလီ အကို့ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (ကို) မာန်လှိုင်းငယ် (ကို) ညိမ်းညို (ကို) ခေတ်ပေါ်ကဗျာလမ်း (ကို) ဇီးကွက် (ကို) နေချိုအေး (ကို) ဖြိုးငယ် (ကို) Black Dream (ကို) ခွန်မောင်မျိုး (ကို) မောင်ကျည်ပွေ့ (ကို) မင်းကျန်စစ် (ကို) ဖြိုး (မ) နှင်းမိုးဝေ (မ) နိုင်းနိုင်းစနေ (မ) မေဓာဝီ (မ) မွန်းသက်ပန် (မ) အိမ့်ချမ်းမြေ့ (မ) ဂျစ်တူး (မ) ဘာညာ (မ) ညလေး (မ) ပန်ဒိုရာ (မ) သဲလေး (မ) လင်းလက်ကြယ်စင် (မ) ရွှေမန်းသူ (မ) မယ်လိုဒီမောင် (မ) ခင်မင်းဇော် (မ) မြလွှာ (မ) ကန်စွန်းဥလေး (မ) လေးမ (မ) ပန်းခရေ (မ) တော့တိုးချန် (မ) လုလု (မ) ပင့်ခ်ဂိုးလ် (မ) စိတ်ကူး (မ) Okisu (new blog) (မ) Okisu (old blog) (မ) နှင်းဆီနီနီ (မ) Chaos (မ) စုသက်လင်း (မ) လင်း (မ) နှင်းပွင့်ဖြူလေး (မ) ၀င်္ကဘာ (မ) အလွမ်းအိမ် (မ) မေပျို (မ) သီရိ (ဒီဇင်ဘာ ညီမလေး) (မ) မြတ်နိုး (မ) ချစ်လေပြေ (မ) သမုဒယ .......... ..
တင်ခဲ့ပြီးသော စာများရဲ့ မာတိကာ
တင်ခဲ့ပြီးသော စာများရဲ့ မာတိကာ October (8) December (3) April (4) February (7) December (2) October (3) September (10) August (18) May (1) April (5) March (3) February (2) January (11) December (3) November (4) October (9) September (8) August (4) July (9) June (14) May (8) April (2) March (2) February (2) January (2) December (5) November (13) October (20) September (9) August (19) July (11) June (14) May (22) April (9) March (20) February (18) January (30) December (16) November (31) October (31) September (14) August (27) July (40) June (18) May (3)
နောက်ဆုံး ပေးခဲ့သော မှတ်ချက်များ
ကျွန်မရဲ့ စာတမ်း (3)
ကလေးအခွင့်အရေး ကြေညာ စာတမ်း (1)
ကျမ်းဂန်လာ ဗဟုသုတများ (6)
တိုတိုထွာထွာ သိစရာ (7)
ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်း တစေ့တစောင်း (5)
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျန်းသို့ အလည်တစ်ခေါက် (2)
သမီးလေး ကြီးရင် ဖတ်ဖို့ (4)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (1)
မွေးနေ့ ဆုတောင်း (2)
လူတိုင်း သက်ရှည် ကျန်းမာဖို့ ကမ္ဘာမြေကို စောင့်ရှောက်စို့
ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ဟာ ရေခဲလို အေးစက် ဖူးပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ မှာ အပျော်တွေ ဖူးပွင့် လာအောင် ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား ခဲ့ရ ပါ တယ်။ အခုတော့ ကျွန်မ ပျော်အောင် နေတတ် ပါပြီ။ ရေခဲ ထဲမှာ ပွင့်တဲ့ ပန်းလေး တစ်ပွင့် က ကျွန်မကို လမ်းညွှန်မှု တွေ ပေးခဲ့တယ်။ လက်မလျှော့ အောင် အားပေး ခဲ့ပါတယ်။ သည်ပန်း လေးကို Botanical name အရ Paphiopedilum wardii လို့ နာမည် ပေးခံ ရပြီး ကချင် ဒေသခံ များ ကတော့ ခွန်မြလှိုင် လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။ Paphiopedilum မျိုးရင်းထဲမှာ wardii မျိုးစိတ်ဟာ ရှားပါးဆုံး ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကမှ စတင် နာမည် စာရင်း သွင်းခံ ရတဲ့ အပင် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ပါ website ကို ကြည့်ရှု လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?319568
Your blog is smart, insightful, and alwaysaquality read. Truly appreciated by many, surpassed by onlyafew
သူများပြောတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အရောင်
"အချိန်မကျသေးခင် မိုးနဂါးဟာရေတိမ်မှာ ပုစွန်နဲ့အတူနေ" ဆိုတဲ့တရုတ်ရှေးဟောင်းစကားပုံကို ကျွန်မကြိုက်တယ်...ခြေနှစ်ဖက်လုံးမှာပါတဲ့မှဲ့ရှင်တွေက နိမိတ်ဖော်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း နေရာအနှံ့မှာကျွန်မနေတယ်....ဂုဏ်=အလုပ်၊ အလုပ်=စွမ်းရည်လို့ ပုံသေနည်းရေးခဲ့တဲ့ အဖေ့သမီးပီသစွာ အနားမနေ ကြုံရာလုပ်တယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီသစွာ ကာလာမသုတ်ကိုလက်ကိုင်ထားရင်းမျက်မှန်စိမ်းအစဉ်အလာကို တော်လှန်သူဟာ ကျွန်မဖြစ်တယ်...သစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကို နှလုံးသွေးစက်လက်နဲ့ရင်းရရင်တောင်မြဲမြဲချစ်တာ ကျွန်မဖြစ်တယ်... အောက်ကိုပစ်ချခံရသမျှ အထက်ကိုပြန်ခုန်တက်တတ်တဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးကို ကျွန်မချစ်တယ်...အဖိနှိပ်ခံရတိုင်း ရှိသမျှအားနဲ့ပြန်ကန်တတ်တဲ့လူသားစပရိန်တစ်ချောင်းဟာ ကျွန်မဖြစ်တယ် (လို့ထင်တယ်)...မြေပြင်ပေါ်က ကျွန်မငွေ့တက်ခဲ့တာပါတချို့ကတော့ ကျွန်မ မိုးပေါ်က ကျလာတယ် ထင်ကြသတဲ့...တချို့သူငယ်ချင်းတွေကပြောကြတယ်...ရဲနေအောင်မီးဖုတ်... မာနေအောင်ထုသားကျပြီးမှ...ပါးနေအောင်အသွေးခံထားရလို့... မဲနေတဲ့ဓားနဲ့ ကျွန်မကတူသတဲ့...တစစီဖြုတ်ထားတဲ့အလှတရားများ ပေါင်းစည်းမိကာမှ မလှပတဲ့အရိပ်များ မျက်ဝန်းများမှာအထင်းသားတဲ့... တကယ်တော့ရေခဲပြင်လိုဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ကြီးပြင်း ရေခဲရိုက်စရိုက်များနဲ့ နေသားကျပေမယ့်ရေခဲပျော်သစ်ခွနက်လိုတော့ ရေခဲကြားမှာပျော်ပျော်ကြီး ဖူးပွင့်ဝန်းကျင်ကို ရနံ့သစ်ပေးဖို့ ဖူးပွင့်လျက်ပါ ကုမုဒြာ။ ။